ỌSỌ ỌSỌ NKE EGWUREGWU NA WINDOWS 7, 8, 10 - ỤLỌ ỌRỤ KACHASỊ MMA NA MMEMME - WINDOWS - 2019
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na egwuregwu ahụ na-amalite ịda mbà n'ihi ihe doro anya ọ bụla: ígwè ahụ na-agbaso usoro ihe achọrọ, kọmputa adịghị arụ ọrụ dị iche iche, na kaadị vidio na onye nhazi ahụ adịghị arụ ọrụ.
N'ọnọdụ ndị ahụ, ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite ime mmehie na Windows.
N'ịgbalị idozi lags na friezes, ọtụtụ na-eweghachị usoro ahụ iji kpochapụ faịlụ ndị na-agba ọsọ, tinye OS ọzọ dịka ya na onye ọrụ ma gbalịa ịchọta nsụgharị nke egwuregwu kachasị mma.
Enwere m mmasị iji nlezianya mee ihe, ịdọ aka ná ntị, mana n'otu oge ahụ, m na-enyefe onwe m ohere nke nnwere onwe n'ime ederede, ka ọ ghara ịdị ka ihe a na-amụ. Ana m ahọrọ isiokwu IT, ụlọ ọrụ egwuregwu.
Ihe kachasị akpata ụda na ụja bụ ibu na RAM na nhazi. Echefula na sistemụ arụmọrụ achọrọ ụfọdụ RAM maka ịrụ ọrụ nkịtị. Windows 10 na-eburu 2 GB nke Ram. Ya mere, ọ bụrụ na egwuregwu ahụ chọrọ 4 GB, mgbe ahụ, PC ga-enwe ọ dịkarịa ala 6 GB nke RAM.
Nhọrọ dị mma bụ iji mee ngwa ngwa na Windows (na-arụ ọrụ na nsụgharị niile nke Windows: 7, 8, 10) bụ iji mmemme pụrụ iche. A na-ahazi ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ iji setịpụ ntọala kachasị mma nke sistemụ arụmọrụ Windows iji hụ na arụmọrụ kachasị na egwuregwu, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ehichapụ OS site na ntinye faịlụ na-adịghị mkpa na ndenye ọjọọ na ndekọ.
Site n'ụzọ, ọganihu dị ịrịba ama na egwuregwu na-enye gị ohere ime ntọala ziri ezi maka kaadị vidiyo gị: AMD (Radeon), NVidia.
Ọganihu dị elu nke usoro nyocha
Onye Mmepụta saịtị: http://www.systweak.com/aso/download/
Advanced System Optimizer - isi windo.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ a kwụrụ ụgwọ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma ma dị mma maka njikarịcha! Ana m etinye ya na mbụ, nke mere - tupu ịmalite ịtọ ntọala kachasị mma maka Windows, ị ga-ebu ụzọ kpochapụ ya "ihe mkpofu" niile: faịlụ ndị na-adịru nwa oge, ndenye na-ezighị ezi na ndekọ ahụ, ihichapụ ihe ndị emeghi ochie, kpochapụ bọtịnụ, melite ndị ọkwọ ụgbọala oge ochie wdg. Ọ nwere ike ime ya niile n'aka, ma ọ bụ site na iji usoro yiri nke ahụ!
Ọ bụghị naanị faịlụ ndị ọzọ fọdụrụnụ site na mmemme mgbe ọrụ gasịrị, kamakwa nje na spyware nwere ike ịkwado RAM ma na-ebugharị processor ahụ. N'okwu a, jide n'aka na antivirus na-agba ọsọ n'azụ, nke ga-ekwe ka ngwa ịrịa ngwa emetụta arụmọrụ nke egwuregwu.
Site n'okporo ụzọ, onye ike ya agaghị ezu (ma ọ bụ ọrụ ahụ agaghị adọta n'okwu gbasara ihichapu kọmputa) - Akwadoro m ịgụ isiokwu a:
Imelite ndị ọkwọ ụgbọala m na - akwado iji mmemme ndị na - esonụ:
Mgbe ekpochapụrụ Windows, ị nwere ike idozi ya niile n'otu aka ahụ (Advanced System Optimizer) maka ịrụ ọrụ kacha mma na egwuregwu ahụ. Iji mee nke a, gaa na ngalaba "Buli Windows" ma họrọ taabụ "Njikarịcha maka egwuregwu", wee soro ọkachamara ahụ. Ebe ọ bụ The utility bụ kpam kpam na Russian, ọ dịghị mkpa ihe nkọwa zuru ezu ??
Advanced System Optimizer - Windows njikarịcha maka egwuregwu.
Onye Mmepụta saịtị: http://www.razer.ru/product/software/cortex
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma iji mee ka egwuregwu kachasị elu! N'ọtụtụ nyocha onwe onye na-eburu ụzọ, ọ bụghị na ọhụụ na ọtụtụ ndị edemede nke isiokwu ndị a kwadoro usoro a.
Kedu uru ndị bụ isi?
Na-agbanwe Windows (ọ na-arụkwa ọrụ na 7, 8, XP, Vista, wdg) nke mere na egwuregwu ahụ na-arụ ọrụ kachasị. Site n'ụzọ, ọnọdụ ahụ bụ akpaka!
Mgbakwunye nke nchekwa na faịlụ egwuregwu (maka ozi ndị ọzọ banyere nchịkwa).
Dekọọ vidiyo site na egwuregwu, mepee nseta ihuenyo.
Nchọpụta na ịchọ os dị mma.
N'ozuzu, nke a abụghị ọbụna ọrụ ọ bụla, kama ọ bụ ezigbo setịpụ maka ịmepụta ma megharịa arụmọrụ PC na egwuregwu. Ekwadoro m ịnwale, echiche sitere na usoro a ga-abụ!
Lezienụ anya maka ịkatọ draịvụ ike gị. A na-edozi faịlụ na mgbasa ozi n'otu usoro, ma n'oge mbufe na nhichapụ ha nwere ike ịhapụ nsụgharị na "mkpụrụ ndụ", na-egbochi ihe ndị ọzọ na-ewere ebe ndị a. N'ihi ya, a na-emepụta ọdịiche n'etiti akụkụ nke faịlụ ahụ niile, nke ga-eme ka ịchọta ogologo oge na nchọta aha na usoro. Mgbakwunye ga-eme ka ebe faịlụ dị na HDD gbanwee, si otú ahụ na-eme ka ọ bụghị nanị usoro ahụ kamakwa arụmọrụ na egwuregwu.
Onye Mmepụta saịtị: //ru.iobit.com/gamebooster/
1. Gbanwee Windows (ọ na-arụ ọrụ n'ime 7, 8, XP, Vista, wdg) nke mere egwuregwu ahụ ji arụ ọrụ. Site n'ụzọ, ọnọdụ ahụ bụ akpaka!
2. Mgbakwunye nke nchekwa na faịlụ egwuregwu (ịmatakwu banyere nchikota).
3. Dekọọ vidiyo site na egwuregwu, mepee nseta ihuenyo.
4. Diagnostics na ịchọ os ọma.
Onye Mmepụta: Unblue Systems
A kwụrụ ụgwọ ọrụ a ma ghara idozi njehie na ihichapụ faịlụ junk n'enweghị ndebanye aha. Ma, ihe ọ hụrụ dị nnọọ ịtụnanya! Ọbụna mgbe nhicha ya na Cleaner Cleaner ma ọ bụ CCleaner, usoro ihe a na-achọta ọtụtụ faịlụ na-adịru nwa oge ma na-enye gị ịsaa diski ...
Ngwaọrụ a nwere ike ịba uru karịsịa nye ndị ọrụ ahụ nke na-ejikarịbeghị Windows ruo ogologo oge, adịghị edozi usoro ụdị njehie na faịlụ na-enweghị isi.
Ihe omume ahụ na-akwado asụsụ Russian, na-arụ ọrụ na njedebe akpaka. N'oge ọrụ, onye ọrụ ahụ ga-achọ pịa bọtịnụ mmalite maka nhicha na njikarịcha ...
Onye Mmepụta saịtị: http://www.pgware.com/products/gamegain/
Obere uru nke shareware iji setịpụ ntọala PC kacha mma. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme ya mgbe ọ nhichachara usoro Windows site na "mkpofu", ihichapụ ndekọ ahụ, na-agbada disk.
Naanị njedebe ole na ole ka edoziri: ihe nhazi (site na ụzọ, ọ na-ekpebi ya na-akpaghị aka) na Windows OS. Mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ị pịa bọtịnụ "Bụrụ ugbu a".
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, a ga-ahazi usoro ahụ ma ị ga-aga n'ihu ịme egwuregwu. Iji mee ka arụ ọrụ kachasị elu, ị ga-edebanye aha ahụ.
Akwadoro jiri ozo a na ndi ozo, ma enweghi ike ilepu ya anya.
Onye Mmepụta: http://www.defendgate.com/products/gameAcc.html
Ihe omume a, n'agbanyeghị eziokwu na emeliteghi ya ogologo oge, bụ ezigbo ngosipụta nke "ọganihu" nke egwuregwu. Na n'usoro ihe a, e nwere ọtụtụ ụdị ọrụ (anaghị m achọpụta usoro ụdị ndị a na mmemme ndị yiri nke ahụ): mmelite elu, ịmị mma, ịtọ egwuregwu ahụ na ndabere.
Ọzọkwa, a ghaghị ịmara ya ike ịkụzi DirectX. Maka ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ, enwekwara nhọrọ dị oke mma - nchekwa ikike. Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na igwu egwu dịpụrụ adịpụ ...
O kwesịkwara ịmara na ọ ga-ekwe omume ka ị gee ntị DirectX. Maka ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ, enwere njirimara nchekwa batrị. Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ị na-apụ na ntaneti.
Onye na-eme ngwa ngwa ga-ekwe ka onye ọrụ ahụ ọ bụghị nanị na-ebuli egwu egwu, kamakwa iji nyochaa steeti FPS, ibu na nhazi na kaadị vidiyo, nakwa nyochaa ole RAM jiri ngwa ahụ. Data ndị a ga-enye ohere iji nweta nkwubi okwu gbasara mkpa nke egwuregwu ụfọdụ maka nhazi ntọala nke ọma.
Onye Mmepụta saịtị: http://www.smartpcutilities.com/gamefire.html
"Ọkụ" bara uru iji ọsọ ọsọ na ebuli Windows. Site n'ụzọ, ikike ya dị nnọọ iche, ọ bụghị onye ọ bụla bara uru ga-enwe ike ịmeghachi ma debe ntọala OS nke Game Fire nwere ike!
gbanwee gaa na nnukwu ihe - rụọ ọrụ arụ ọrụ na egwuregwu;
Ejikarị usoro Windows OS (gụnyere ntọala zoro ezo na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ amaghị);
akpaaka nke usoro ihe omume na-ebute ụzọ kwụsị iwepụ na egwuregwu;
nbibi nke nchekwa na egwuregwu.
Onye Mmepụta saịtị: http://www.softcows.com
Usoro a nwere ike ịgbanwe ọsọ nke egwuregwu kọmputa (n'echiche kachasị nke okwu ahụ!). Ma ị nwere ike ime nke a site n'enyemaka nke bọtịnụ ọkụ dị mma na egwuregwu ahụ n'onwe ya!
Gini mere i ji choro ya?
Ka e were ya na ị na-egbu onye nwe ụlọ ma chọọ ịhụ ya ịnwụ n'egbughị oge - pịa bọtịnụ ahụ, nwee oge, ma gbalịa gaa n'egwuregwu ruo onye isi ọzọ.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezigbo ọrụ bara uru na ike ya.
Obere eleghi anya na ngwa ngwa nwere ike inyere aka na-ebuli egwuregwu ma melite arụmọrụ nke kọmputa onwe onye. Kama nke ahụ, ngwa ahụ ga-ebupụta kalịnda vidiyo gị na onye nrụpụta ọrụ gị, n'ihi na ịgbanwe ọsọ nke playback playplay bụ ọrụ nke chọrọ mgbalị dị ukwuu site na ngwaike gị.
Onye Mmepụta: iobit.com/gamebooster.html
Akụrụngwa a n'oge ịmalite egwuregwu nwere ike iwepu usoro "enweghị isi" na ọrụ ndabere nke nwere ike imetụta arụmọrụ ngwa. N'ihi nke a, a tọhapụrụ ihe onwunwe nke nhazi ahụ na RAM ma na-eduzi ya maka egwuregwu egwuregwu.
Oge ọ bụla, ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịgbanwere mgbanwe ndị ahụ. N'agbanyeghị, tupu iji ya akwadoro ka ị gbanyụọ antiviruses na firewalls - Egwuregwu Turbo Booster nwere ike imegide ha.
Onye Mmepụta: Alex Shys
Egwuregwu Prelauncher dị iche na mmemme ndị dị otú ahụ bụ na ọ na-eme ka Windows gị bụrụ ebe dị egwu, na-enweta ezigbo njirimara ngosi!
Egwuregwu Prelauncher dị iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ bụ nanị RAM zuru oke, site na mmemme na nsogbu na-arụ ọrụ. N'ihi nke a, echekwaghị arụmọrụ arụmọrụ, enweghị ohere ọ bụla na diski na nhazi ahụ, wdg A ga-eji ihe nchịkwa kọmputa rụọ ọrụ site na egwuregwu na usoro kachasị mkpa. N'ihi nke a, acceleration na-enweta!
Ngwa a na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile: ọrụ na mmemme, ụlọ akwụkwọ, ọbụna Explorer (na desktọọpụ, Mmalite menu, oche, wdg).
Kwadebe na ọrụ mmebi ahụ site na ngwa egwuregwu Prelauncher nwere ike imetụta ọrụ nke kọmputa gị. Ọ bụghị usoro niile ka edozighachiri n'ụzọ ziri ezi, na iji ọrụ ha dị na ya dị mkpa. Iji mmemme ahụ ga-eme ka FPS na arụmọrụ n'ozuzu, ma echefula ịlọghachi ntọala os na ntọala mbụ mgbe ihe egwuregwu ahụ gasịrị.
Onye Mmepụta: Smartalec Software
Ọ dịwo anya amaara na Explorer maara nke ọma na-ewepụ ọtụtụ ihe onwunwe kọmputa. Ndị mmepe nke ọrụ a kpebiri ime ka ha GUI maka ndị gamers - GameOS.
Ogo a na-eji ihe nchekwa na ihe nhazi nke kachasị, nke mere na ha nwere ike iji ya na egwuregwu ahụ. Ị nwere ike ịlaghachi na Explorer mbụ na 1-2 click sour (ịkwesịrị ịmalitegharịa PC).
N'ozuzu, a na-atụ aro ya maka ịmara ndị ọhụụ niile!
M na-ekwukwa na tupu ị hazie Windows, mee nchekwa ndabere nke diski: